Kenya iyo AMISOM oo la sheegay inay ku gorgortamaan Qaxootiga iyo La-dagaalanka Alshabaab si ay Beesha Calaamka uga helaan Dhaqaale badan. – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Kenya iyo AMISOM oo la sheegay inay ku gorgortamaan Qaxootiga iyo La-dagaalanka Alshabaab si ay Beesha Calaamka uga helaan Dhaqaale badan.
Ku-xigeenkii hore ee Afhayeenka Barlamaanka Kenya, Faarax Macallim Dawaare ayaa ku eedeeyey Dowladda Kenya inay Go’aanka lagu celinayo Qaxootiga Soomaalida uga dan leedahay si ay Beesha Caalamka uga helaan Dhaqaale dheeraad ah.
Isagoo Khadka Telefoonka kula hadlayey Wargeyska Maalinlaha ee The Nation ee ka soo baxa magaalladda Nairobi waxa uu tilmaamay inay Dowladda Kenya siyaabo kala duwan ku gorgortanto, wuxuuna hoosta ka xariqiay inay xaqiiqadu tahay inaysan Qaxootiga aadi doonin meel kale.
“Waa dugaagnimo in lagu eedeeyo Xerooyinka Qaxootiga in laga so oqorsheeyey weeraradii Argagixisadda ee ka dhacay Kenya” ayuu yiri Farax Macallim oo intaasi ku daray inuusan jirin qof Qaxooti ah oo lagu soo oogay eedeymo la xiriira Falalka Argagixisadda.
Ku-xigeenkii hore ee Afhayeenka Barlamaanka Kenya, Faarax Macallim Dawaare waxa uu tilmaamay inay Dowladda Kenya Taatiko iska leexin ah u adeegsanayso dib-u-celinta 350,000 ee qaxootiga Soomaalida ee ku jirta Xerada Dhadhaab.
Dhinaca kale, Faarax Macallim, waxa uu Hawlgalka AMISOM ku tilmaamay inay ku dhaqmaan Gorgortanka Dowladda Kenya oo kale, isla markaana ay Beesha Caalamka Dhaqaalaha badan kaga qaataan La-dagaalanka Alshabaab.
Waxa uu tilmaamay inuusan sii joogitaanka Ciiddanka AMISOM ee Somalia dan u ahayn Nabad-ilaaliyayaasha, balse uu dan yahay Dowladaha ay ka soo jeedaan si ay Beesha Caalamka uga baryaan in Taageero Dhaqaale lagusiiyo La-dagaalanka Alshabaab.
Sidoo kale, Ku-xigeenkii hore ee Afhayeenka Barlamaanka Kenya, Faarax Macallim Dawaare waxa uu ka shanqariyey inaysan jirin cid kula xisaabtana Ciiddanka AMISOM, Uganda, Burundi iyo Ethiopia kharajka ay ka helaan QM, isla markaana inaysan Ciiddanka AMISOM danaynaynin inay Alshabaab u awood sheegtaan, balse ay dantooda ku jirto sidii ay ku heli lahaayeen Kharaj caddaan ah.
Waxa uu intaasi ku daray inay wax laga xumaado tahay inay Kenya ku biirtay Naadiga AMISOM
Deg Deg: Ciidamada Danab iyo Ciidamo ajaanib ah oo weeraray Al Shabab
Qubrus oo qorsheynaysa in la kala raro Qaxooti Somali iyo kuwo Carab oo ku dhex dagaalamay Xero Qaxooti.